InVideo: Gadzira Tsika Yemavhidhiyo Vhidhiyo Yemagariro Media Mukati Maminetsi | Martech Zone
Ose podcasting uye vhidhiyo mikana inoshamisa yekudyidzana nevateereri vako nenzira inotyisa uye inovaraidza, asi hunyanzvi hwekugadzira nekugadzirisa hunodiwa hunogona kunge huri kunze kwenzira dzemabhizinesi mazhinji - tisingareve nguva nemari.
Vhidhiyo ine ese maficha eakakosha vhidhiyo mupepeti, asi neakawedzera maficha ekubatana uye aripo matemplate uye zviwanikwa. InVideo ine pamusoro pe4,000 pre-yakagadzirwa vhidhiyo matemplate uye mamirioni efa (mifananidzo, odhiyo, uye mavhidhiyo mavhidhiyo) iwe aunogona kugadzirisa nyore, kugadzirisa, uye kurodha pasi kuti ikubatsire iwe mukugadzira nyanzvi intros, outros, vhidhiyo kushambadzira, kana yakazara mavhidhiyo ekushandisa yemagariro enhau.
InVideo chinangwa chakavakirwa mabhizinesi, vezvekushambadzira, uye vezvekutengesa kuti vagadzire zvirinyore uye kutsikisa mavhidhiyo avo. Iyo puratifomu inoita kuti iwe ukwanise account yako neako dhizaini dhizaini uye shandisa kesi kuitira kuti iwo matemplate akosheswe.
Iwe unogona zvakare kugadzirisa account yako neako logo, mafonti, uye epamberi mavara kuitira kuti ashandiswe nyore nyore kumatemplate ako. Pavhidhiyo yega yega, unogona kuisa rako pachako izwi, vhidhiyo, odhiyo, kana mifananidzo yaungade kuisa - saka hauganhurirwe kumatemplate avo kana raibhurari yezvinhu.
Iwe unogona zvakare kubatanidza yako Facebook, Twitter, uye Youtube maakaunzi uye kutsikisa zvakananga kubva kune yavo interface kana iwe uchinge wadzokorora uye wabvumidza iyo yakapedzisa vhidhiyo.
Tora 25% Bvisa Yako InVideo Kunyorera
Chinyorwa kuVhidhiyo Kugadziridza
Chishandiso chakazonaka chavanacho kugona kuteedzera kana kunama mameseji, kana kunyorova chinyorwa kubva kuchinyorwa. Nekudaro, kana iwe uchida kugadzira mapfupi, mapfupi mavhidhiyo anosanganisira akakosha mapoinzi kubva kuchinyorwa chako kusimudzira kuburikidza nesocial media.
Vaka Zvinyorwa Zvemavhidhiyo
Kumwe kushandiswa kukuru kweizvi kugadzira mavhidhiyo erondedzero… ayo anozivikanwa zvakanyanya pasocial media. Ini ndakakwanisa kuvaka iyi vhidhiyo mune angangoita maminetsi gumi, ndichiisa zvangu skrini uye ndichishandisa imwe yeInVideo akawanda maListicle matemplate:
Iyo Storyboard interface yekugadzira nyaya kana zvinyorwa zvinonzwisisika uye zviri nyore kushandisa. Iwe unogona kutonama mune yako script uye woita kuti iite autogenerated zvichienderana netemplate!
Intro uye Outro Vhidhiyo ine Logo Reveal Matemplate
Nhasi, ini ndakakwanisa kugadzirisa uye kugadzira diki yemhuka logo inoratidza yangu Martech Zone mavhidhiyo achishandisa InVideo logo inoratidza template:
Ini ndakakwanisa kuchinjisa mafonti, nguva dzechinhu chimwe nechimwe, uye maficha ekugadzira vhidhiyo inotapira yandinogona ikozvino kuendesa kumavhidhiyo ese andiri kutsikisa kuYouTube!
Iva nhengo Martech Zone paYouTube
Maitiro Ekugadzira Iyo Vhidhiyo Kubva muInVideo Template
Iyo yekushandisa interface yekumura yako vhidhiyo iri kusimba kusanzwisisika… sarudza pre-yakagadzirwa template, chinyorwa-kune-vhidhiyo template, kana ingotanga neisina chinhu canvas.
Kana iwe uchitsvaga template, ingoisa mashoma mashoma mazwi ekutsvaga imwe. Iwe unogona kudzvanya uye kutamba yega yega mumhedzisiro kuti uwane iyo template iwe yaunoda kutanga nayo.
Sarudza zviyero zvevhidhiyo - yakafara (16: 9), square (1: 1) kana vertical (9:16).
Ita yako sarudzo, gadzirisa vhidhiyo, uye ipapo unogona kurodhaunira kana kutsikisa rakananga kuFacebook, Twitter, kana Youtube.
Kana iwe uchida kugadzirisa vhidhiyo yacho kumberi, heino kufamba kukuru-kuburikidza nesarudzo dzepuratifomu. Iko hakuna chaiko chero ganhuriro zvachose!
Kana iwe uchida kugadzirisa vhidhiyo yacho kumberi, heino kufamba kukuru-kuburikidza nesarudzo dzepuratifomu. Iko hakuna chaiko chero ganhuriro zvachose! Uye ... haungatende mutengo wepuratifomu… zvinoshamisa.
Ah… uye sezvo uri Martech Zone muverengi, iwe unowana imwe 25% kubviswa paunoshandisa yangu link:
Disiki: Ndiri Vhidhiyo yakabatana (uye mutengi) uye ndiri kushandisa chinongedzo changu muchinyorwa chino.
Tags: Facebook kushambadzira vhidhiyo musikiFacebook ad vhidhiyo inogadzirainstagram vhidhiyo mupepetiintro makervhidhiyokokero vhidhiyo muitichinyorwa videoonline vhidhiyo musikionline vhidhiyo mupepetioutro makerpromo vhidhiyo inogadzirashort videopasocial media vhidhiyoyemagariro vhidhiyovhidhiyo mushambadzi musikivhidhiyo yekushambadziramugadziri wevhidhiyomavhidhiyo matemplateYouTube intro inogadziraYouTube vhidhiyo musiki